सामाजिक सञ्जाल कति सामाजिक ?- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
सामाजिक सञ्जाल कति सामाजिक ?
जेष्ठ ३१, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
ट्विटर कति सामाजिक छ त ? ट्विटर एक माइक्रो ब्लगिङ साइट हो, जसमा तपाईंले विचार पढ्न मन लाग्ने अकाउन्टहरू फलो गर्नुहुन्छ र तपाईंको विचार पढ्न मन लाग्नेहरूले तपाईंलाई फलो गर्छन्  ।
आफूले फलो गरेको अकाउन्टबाट भएका ट्विटहरू रियल टाइममा अर्थात त्यतिबेला नै तपाईंले आफ्नो टाइम लाइनमा देख्न सक्नुहुन्छ । त्यसलाई रिट्विट, लाइक र रिप्लाइ गर्न सकिन्छ । रियल टाइम अन्तरक्रिया हुने भएकाले पनि केही समययता युवा पुस्तामाझ ट्विटर लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ । ठूला सेलिब्रेटी तथा पब्लिक फिगरहरूलाई फलो गर्नेहरू एकदमै ज्यादा हुन्छन् ।
नेता, कलाकार, गायक, खेलाडीहरूको अकाउन्टमा धेरै फलोवर देख्न सकिन्छ । उनीहरू छिटफुट कुनै–कुनै आवश्यक कुरामा कहिलेकाहीं ट्विट गर्छन् । अर्कोतर्फ प्रायःजसो ट्विटरमा नै भेटिने केही जमात पनि हुन्छ । उनीहरू ट्विट गरिरहन्छन् । भेनेजुएला मामिलादेखि सिरिया आक्रमणसम्म, प्रिमियर लिगदेखि आईपीएलसम्म, चन्द्रमादेखि अन्टारटिकासम्म उनीहरूले नजानेको केही हुँदैन । बेला–बेला लाग्छ, उनीहरू हिँडडुल गर्ने गुगल हुन् ।जीवन र जगतबारे यसरी बहस हुने भएपछि स्वतः केही कलह पनि हुने नै भयो । यस्तो अवस्थामा परिचय प्रयोग नगरिएका अकाउन्टबाट व्यक्तिगत गालीगलौज र अपमानपूर्ण शब्दहरूको प्रयोग गर्ने स्तरसम्म पुग्छन्, टुइटेहरू । यसले सामाजिक सद्भाव भड्काउने मात्र नभई मानिसलाई कुनै विषयप्रति धारणा बनाउन नकारात्मक प्रभाव पनि पर्छ । आफ्नो परिचय प्रयोग नगरिएका अनि समाजमा द्वेष तथा घृणा फैलाउने फेक तथा हुँडार अकाउन्टहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक छ । ट्विटर मुख्यालयसँग सहकार्य गरेर नेपालबाट ट्विटर अकाउन्ट लग इन गर्दाचाहिँ नागरिकताको फोटोकपी पनि पेस गर्ने व्यवस्था गर्नसके यो स्थितिमा नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । अन्यथा यी सञ्जालहरू विस्तारै असामाजिक बन्दै गएर राज्यका मूल मर्ममाथि नै आक्रमण गर्न नपुग्लान् भन्न सकिन्न ।
– युजिर शर्मा, ताप्लेजुङ
प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०७६ १०:३७
बनाउने, भत्काउने अनि माग्ने
हाम्रा सरकारी निकाय बीचको जस्तो असमझदारी, बेमेल, दम्भ, अहंकार, समन्वयविहीनता संसारका विकसित, विकासशील एवं अल्पविकसित मुलुकमा कतै देख्न पाइँदैन  ।
जिल्ला स्तरमा केही समझदारी, सहयोग र समन्वयबाट विकासका काम अघि बढे पनि निर्माणकार्यमा केन्द्रीय स्तरको दुर्दशाले दुनियाँ हँसाइरहेको छ । सडकपेटी, सार्वजनिक स्थलहरूमा ताण्डवबारे मच्चिरहेको छ । सडक विभाग, दूरसञ्चार संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, खानेपानी संस्थानको सडक भत्काउने र जथाभावी पुर्ने काम, नगर/महानगरपालिकाको सडक केन्द्रित क्रियाकलापले उपत्यकाका सर्वसाधारण प्रताडित हुँदै आएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनलाग्दा सडक, गल्लीको दुर्दशा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।
जनताको सुखसुविधाको लागि स्थापित सरकारी संस्था कोही कसैको कुरा सुन्ने अवस्थामा कहिल्यै देखिएनन् । आ–आफ्नै ढंगबाट सडक भत्काउने, पुर्ने, हिलो र धुलोले भर्ने काममा जुटेका छन्, यी निकाय । एउटा उदाहरण लिऊँ ः महानगरपालिकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत जडान भएको ३० घरको पाइप चुँडाइदिएपछि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकले घोर असन्तुष्टि जनाएको छ । यस्तो विसंगति देखेर चिडिएको एडीबीले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ‘यस्तो अवाञ्छित स्थितिमा दोहोरो भुक्तानी दिन सकिँंदैन, फुटाउनेले नै बनाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनु सम्बन्धित निकाय एवं नेपालीको निम्ति लज्जाको विषय होइन र ?
ढिलै भए पनि न्यायको आस
सी सन्देश : जनतामाथि विश्वासघात नगर्नू
सीको आँखा दक्षिण एसियामा
छिमेकी ललकार्ने प्रवृत्ति